Maxaa dhacaya haddii aanan addeecin dhammaan amarrada? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Waan ka xumahay. Tani ma’ahan war wanaagsan. Dhab ahaantii waa war aad u xun maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay adiga (iyo anniga sidoo kale maxaa yeelay waxaa i haysta dhibaato la mid ah) ma aan lehi xaqnimo. Xaqnimadu waa muhiim sababtoo ah waa aasaaska u ah waxa weeye boqortooyadda Ilaah ka dhigi doonaa Jannada. Waxa ay noqon doontaa Isafgaradkeennii ee wada shaqaynta aannu la leenahay midba midka kale (aan jirin been sheegid, wax xadid, wax dil, sanam caabudid iwm) iyo cibaadada saxda ah ee Alle ku soo dayn doonaa Jannada. Tani waa sababta loo baahan yahay xaqnimo gelida iridda Boqortooyada Quduuska sida Dawood uu ku muujinayo Zabuur. Dadka ku tilmaaman sidan oo keliya ayaa geli doonaa Boqortooyadda Quduuska ah iyo in waa sababta waxa ay noqon doontaa Jannada.
Rabbiyow, bal yaa taambuuggaaga ku fadhiyaya?
Oo bal yaa buurtaada quduuska ah degganaanaya?
2 Waa kii si qumman u socda, oo xaqnimo sameeya,
Oo qalbigiisa run kaga hadla.
3 Waana kii aan carrabkiisa wax ku xaman,
Ama aan saaxiibkiis xumaan ku samayn,
Ama aan deriskiisa cay ku soo hadal qaadin,
4 Kii indhihiisu ay nejiska quudhsadaan,
Oo isagu murweeya kuwa Rabbiga ka cabsada,
Kii hadduu dhaarto oo ay waxyeello ku tahay, aan isbeddelin,
5 Kii aan lacagtiisa u soo bixin korsocod,
Ama aan laaluush u qaadan inuu wax yeelo kuwa aan xaqa qabin.
Kii waxyaalahaas sameeya weligiis lama dhaqaajin doono. (Sabuurradii 15:1-5)
Laakiin tan iyo adiga (iyo Anniga) ma aan nihin sidan had iyo jeer oo kale, maxaa yeelay mar walba ma wada samayno ammarradda oo waan dembaabnaa. Sidaas aawadeed waa maxay dembigu? Qayb ka mid ah buugga kitaabka kaliya ka dib markii Tawreedka ee Axdiga Hore siinaysaa sawir ah in ay iga caawisay in aan si fiican u fahmaa. Qaybtan waxa ay leedahay
Oo dadkaas oo dhanna waxaa ka mid ahaa toddoba boqol oo nin oo la soo xulay oo wada gurran, oo mid waluba ka dhaadhacay wadhafka tuuristiisa oo xataa uusan la waayayn tin. (Xaakinnada 20:16)
Qaybtani waxa ay qeexaysaa askar kuwaasoo ahaa khubaro yaqaan sida loo isticmaalo leebaababka oo aan marnaba la waayayn. Tawreedka iyo Axdigii Hore waxaa qoray nebiyaddii kuna qoreen afka Hebruugga. Erayga Hebruuggu u turjumataa ‘La waayayn‘ kor waa יַחֲטִֽא׃ (loogu dhawaaqaa Khaw-taw). Tani isla Hebruugga ah eray waa sidoo kale waxaa loo tarjumaa dambi Tawreedka. Tusaale ahaan, tan isla Hebruugga eray waa ‘dambi’ markii Yuusuf, loo iibiyay sidii addoon oo kale Masar, ma uu la samaynayo sino naagtii sayidkiisii lahaa, inkastoo bariday (Sidoo kale lagu xusay Quraanka Surat 12: 22-29 – Yusuf). Kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi:
oo weliba gurigan mid aniga iga weynu ma joogo, oo isaguna waxba igalama hadhin adiga mooyaane, maxaa yeelay, adigu waxaad tahay naagtiisii, de haddaba sidee baan u samayn karaa xumaantan weyn, oo aan Ilaah ugu dembaabaa? (Bilowgii 39:9)
Oo kaliya ka dib markii bixinta Tobanka Ammar ee Tawreedka wuxuu leeyahay:
Markaasaa Muuse wuxuu dadkii ku yidhi, “Ha cabsanina, waayo, Ilaah wuxuu u yimid inuu idin tijaabiyo, iyo in ka cabsashadiisu idinku jirto, si aydnaan u dembaabin.” (Baxniintii 20:20)
In labadan meelahan waa isku eray Hebruu ah יַחֲטִֽא׃ loona tarjumay ‘dembi’. Dhab ahaantii waa isku eray ‘La waayayn‘askartu dhagxaanta wadhafka bartilmaameedsadeen sida qaybahan oo macnaheedu yahay ‘dembi ‘ marka lala xaajoonayo dadka daaweeyntooda oo ay wax isugu qabanayaa. Ilaah baa ina siiyey sawir la yaab leh si ay nooga caawiyaan in aan fahano waxa ‘dembi’ uu yahay. Askari baa qaatay dhagax oo la dhacay wadhif bartilmaameedkii. Haddii uu seego waxa uu ku guuldareystay qasdigiisii. In si la mid ah, Ilaah baa inooga dhigay in la garaaco bartilmaameedkii ku saabsan sida aan isaga ku caabudno iyo sida aan ula dhaqmaan dadka kale. in ‘dembi’ la sameeyo waa in la waayay ujeedkan, ama bartilmaameedka, uu Ilaah inala doonayo. Taasi waa xaaladda qudheennu dhexdeenna ayaynu ka heli karno marka aynaan amarrada oo dhan dhawrin – waan seegay ujeedka Ilaah.
Geeri – Natiijadda dembiga ee Tawreedka
Saas aawadeed waa maxay natiijaddani? Waxaan ku aragnay markii ugu horeesay Calaamadii Aadan. Markii Aadan caasiyey (hal mar oo keliya!) Ilaah wuxuu u yeelay isaga mid dhimanaya. Haddii si kale loo dhigo, isagu waxa uu ahaaday mid dhiman doona. Tani waxay ku sii socotay Calaamadii Nuux. Ilaah baa dadkaas geeridii daadkii ku soo xukumay. Oo waxaa ay sii socotay Calaamadii Luudh halkaas oo xukunku mar kale waxay ahayd dhimashada. Wiilkii uu dhalay Ibraahim oo la moodayay in uu ku dhinto allabari. Cudurkii tobnaad ee cudurka Kormaridda wuxuu ahaa dhimashada wiilka curadka ah. Arrimuhu hadda waa la sii aasaasay markii Ilaah la hadlay Muuse (NNKH). Waxaan aragnaa in ka hor Ilaah Isagu xaggiisa ka soo qoray Tobanka Ammar, oo wuxuu ku amray kuwan soo socda:
10 Kolkaasaa Rabbigu wuxuu Muuse ku yidhi, Bal orod oo dadka u tag, oo maanta iyo berri quduus ka dhig iyaga, oo dharkooda ha dhaqeen, 11 oo maalinta saddexaad diyaar ha u noqdeen, waayo, maalinta saddexaad dadka oo dhan hortiisa ayaa Rabbigu ku soo degi doonaa Buur Siinay. 12 Oo waa inaad soohdin dadka kaga wareejisaa, oo waxaad ku tidhaahdaa, Iska jira, oo buurta ha fuulina, hana taabanina xuduudkeeda; waayo, ku alla kii buurta taabta hubaal waa la dili doonaa. (Baxniintii 19:10-12)
Hannaankani waa uu soo sii socday Tawreedka oo dhan. Kadib, reer Binu Israa’iil weli ma aysan u adeecin Ilaah si buuxda (waa ay dembaabeen) laakiin waxay meeshiisa Quduuska ah ku soo dhawaadeen. Halkan fiiri walwalkooda marka ay ogaadaan cawaaqib xumadooda.
Reer Binu Israa’iil waxay Muuse ku yidhaahdeen, “”Waanu dhiman doonaa! Waan khasaarnay, waanuna khasaarnay! Qof kasta oo u soo dhawaada taambuugga Ilaah Rabbiga waa uu dhiman doonaa. Miyeene wada dhiman doonaa?” (Tirintii 17: 27-28)
Harun (sidoo kale loogu yeedhay Haaruun – NNKH), kii walaal u ahaa Muuse (NNKH), isaga qudhiisu wuxuu lahaa wiilal, kuwaasoo ku dhintay maxaa yeelay, waxay ku soo dhawaadeen meesha Quduuska ah ee Ilaah iyagoo dembi samaynaya.
Oo markii Haaruun labadiisii wiil ay Rabbiga hortiisa u soo dhowaadeen oo ay dhinteen dabadeed ayaa Rabbigu Muuse la hadlay, 2 oo wuxuu Muuse ku yidhi, Walaalkaa Haaruun la hadal si uusan goor walba u soo gelin meesha quduuska ah oo ilxidhka ka shishaysa gudaheeda, oo ka soo hor jeedda daboolka sanduuqa kor saaran, yuusan dhimane, waayo, anigu waxaan ka dhex muuqan doonaa daruurta kor saaran daboolka. (Laawiyiintii 16:1-2)
Sidaas Haarun (NNKH) waxaa la baray sida haboon ee isagu qudhiisu meeshan u wajahayo. Oo Ilaah isaga baray sida wadaadnimadu ku dheehan tahay:
Oo adiga iyo wiilashaada kula joogaaba waa inaad wadaadnimadiinna u dhawrtaan waxyaalaha meesha allabariga oo dhan, iyo waxyaalaha daaha ka shisheeya oo dhan, oo waa inaad adeegtaan. Wadaadnimada ayaan idiin siiyey sida hawl hadiyad ah; oo shisheeyihii soo dhowaada waa in la dilaa. (Tirintii 18: 7)
Muddo kadib qaar ka mid ah gabdhihii kuwaasoo aan lahayn walaalo ayaa ku soo dhawaaday Muuse (NNKH) dhaxal dhulka. Waa maxay sababta uu aabbahood u dhintay?
“Aabbahayo wuxuu ku dhintay cidladii, laakiinse isagu kuma uu jirin kooxdii is-urursatay oo Rabbiga geesta ka ahayd, oo kooxdii Qorax ahayd, illowse isagu wuxuu u dhintay dembi uu isagu lahaa, oo isagu wiilalna ma uu lahayn.” (Tirintii 27: 3)
Sidaas daraaddeed waxaa la aasaasay qaab caalamiya, laguna soo koobay dhamaadka Tawreedka
… nin kasta waa in loo dilaa dembigiisa uu isagu falay. (Sharciga Kunoqoshadiisa 24: 16b )
Ilaah waxa uu barayey reer Binu Israa’iil (iyo annagaba) in natiijada dembigu uu yahay dhimashada.
Laakiin ka warran naxariista Ilaah. Ma’aha caddayn meel walba kadibna? Oo wax ma ka baran karnaa? Haa! Oo Haa! Waxay noo tahay muhiim qofka dembiga qala iyo kan ay ka maqan tahay xaqnimadu in ay fiiro gaar ah u yeeshaan naxariistan. Waxa ay ahayd mar hore mid ka mid ahaa Calaamadihii hore. Haddaba si cad waa loo arki doonaa Calaamadihii Haarun – mid ka mid ah hal Sac iyo labada orgi.